Qaar kamid ah ururo Siyaasadeedyadda Puntland oo qaadacay ka qaybgalka doorasho bilaa diiwaan ah. – Radio Daljir
Abriil 5, 2013 3:00 b 0
Garoowe, April 4, Ururada siyaasadeedyada ?Midnimo. Udad iyo Wadajir ayaa maanta ku dhawaaqey inaysan ka qeyb galidoonin ?doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland.?
Shir jiraa?id oo ay ururada maanta ku qabteen xafiiska urur siyaasadeedka Udad ayay warkaan ku shaaciyeen.
Gudoomiyaha ururka Udad Siciid Faarax Maxamed ?Sanweyne ? ayaa shirkaan jiraa?id ku cadeeyay moqifka ay ka taaganhyihiin ka qeyb galka doorashooyinka, Waxaana uu sharuud uga dhigay ?in dib loosoo celiyo xeer barlamaanka Puntland ?wax kaga ?badaleen sharuudaha codbixiyaha doorashooyinka.
Xeerkaan ayuu Siciid Sanweyne sheegay inuu yahay mid bud dhig u ah doorashooyinka dowladd hoose ee lagu wado inay bisha may ka qabsoomaan ?gobolada Puntland.
Wuxuu sheegay arintaan inay dowladda Puntland ?kala hadleen hase ahaatee wuxuu cadeeyay ?inay arintaasi dowladdu ka dhaga adaygtay fulinteeda.
Dhinaca kale Siciid Sanweyne wuxuu dowladda ku cambaareeayay go;aanka ay dowladdu ku xirtay idaacaddaha Daljir, codka nadabada iyo One Nation.
Gudoomiye ku xigeenka urur siyaasadeedka Midnimo Maxamed C/Nuur oo kamid ahaa xubnihiii shirkaan qabtay ayaa isagu madasha shirka ka aqriyay warsaxaafadeed ay ku qaadacayaan ka qeybgalka doorashooyinka kaas oo uu ku saxiixnaa gudoomiyaha urur siyaasadeedka Midnimo Dr Saadiq Eenow.
Gudoomiye ku xigeenka ururka Midnimo Maxamed C/Nuur ayaa arintaan u sababeeyay waxbadalka lagu sameeyay xeerar doorashooyinka kuwaas oo uu sheegay meel ku dhac ku yihiin dimuqraadiyada saxda ah ee iminka ka taabogalaysa Puntland.
Wuxuu gudoomiye ku xigeenku dhinaca kale si weyn u cambaareeyay guddiga kmg ah ?doorashooyinka Puntland, Wuxuuna ku cambaareeyay in cad ugu shaqeeyaan ururka muxaafidka ah ee Horseed Waxuuna yiri, ? arintaan waxay Qatar ? ku tahay ?xasiloonida iyo degenaanshaha Puntland?
Xoghayaha guud ee urur siyaasadeedka Wadajir Maxamed Xaaji Aadan ?oo isaguna katirsanaa ?qaban qaabiyaashii shirkaan ayaa dhiniciisa ku taageeray ururada qaadacaada ka qeybgalka doorashooyinka Puntland.?
Maxamed Xaaji Aadan wuxuu sheegay inay weli ku taaganyihiin go?aamo ay horey u qaateen ururada siyaasada kaas oo ku aadanaa hergalinta qodobo saldhig u ahaa doorashooyinka golaha deegaanka oo horey barlamaanka u meel mariyay.
Xildhibaan C/laahi Siciid Caarshe oo kamid ah xildhibaan dhowr ah oo ka qeyb galay shirkaan ayaa ku raacay ururada go?aanka ay ?ka qaateen ka qeybgalka doorashooyinka.
Xildhibaan Caarshe ?oo kamid ah mudanayaashii diidanaa anixinta waxkabadalka sharuudaha codbixiyaha ayaa sheegay sharuudahaas inaykasoo horjeedaan dastuurka Dawladda Puntland.
Ra’isal Wasaare Saacid oo gaarey magaalada Addis Ababa (Sawiro)